Gasikara ve no efa ho rendrika sa ny rano no betsaka ?
Ahiana ny hiparitahan’ny valan’aretina vokatry ny orana nikija nandritran’ny erinandro tsy ankiato
Tsy mijanona ao Antananarivo intsony ny fisian’ny tondradrano ankehitriny fa saika ho manerana ny nosy izany, fanontaniana no apetrak’ireo olona maro izay miresaka eny rehetra eny sy any amin’ireo tambazotra sosialy maro samihafa ny amin’ny antony mahatonga izao tondradrano izao.
Raha ny zavatra fantatra anefa araka ny nambaran’ireo teknisianina dia noho ny fanorenana trano eny ambony lakandrano ka mahatsentsina an’izany no mahatonga an’izao rano be izao. Atrany ampotopehy ka hatrany amin’ny kibo izany no afitsoky ny rano amin’izao fotoana izao.
Raha ny eto Toamasina manokana no Asian-teny dia saika ho dibo-drano avoakoa ny faritra rehetra toy ny eny Mangarano, Andranomadio, Tanambao V, Tanambao II sy ny maro hafa ary dia nampikaikaika ny olona mihitsy ny fisian’ity rano be eran’ny tanana ity.
Tafiditra ao antrano ny rano raha handeha hivoaka ny trano dia tsy maintsy manitsaka rano. Betsaka araka izany ireo olona marary vokatry ny rano maloto tsy Fanta-piaviana eny rehetra eny, mamely ny aretin-koditra torakizany koa ireo marefo amin’ny kibo dia saika mirongatra koa ny aretin-kibo izany dia noho ny fiakaran-drano diso tafahoatra avokoa.
Manaitra ny sain’ireo tompnandraikitra araka izany ireo vahoaka hitady vahaolana haingana dia haingana ny amin’ny mba tsy hiparitahan’ny aretina vokatry ny fiakaran’ny rano.
(99) Lantomalala S. : 09-03-2015 - 15:30